Ugu yaraan shan madfac oo ku dhacay banaanka hore ee xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo madaxweynaha cusub uu xafiiska la wareegay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan shan madfac oo ku dhacay banaanka hore ee xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo madaxweynaha cusub uu xafiiska la wareegay
Xasan Shiikh Maxamuud oo xarunta madaxtooyada si rasmi ah ugu wareejiyay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan madfac oo looga shaki qabo ururka Al-Shabaab ayaa ku dhacay banaanka hore ee xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee gudaha Muqdisho maanta oo Khamiis ah, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Ugu yaraan labo qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen madaafiicdaas lala eegtay deegaanada u dhow xarunta madaxtooyada.
Tani ayaa imaanaysa saacado yar kadib markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud uu xarunta madaxtooyada si rasmi ah ugu wareejiyay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Puntland ayaa yeelatay dhisme cusub oo laga dhisay gudaha magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah si rasmi ah xariga uga jaray [...]
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo dib loo dhigayo bisha December: Warbixin
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada Soomaaliya oo lagu balansanaa in ay dhacdo bisha September ayaa la filayaa in ay dib u dhacdo bisha December, sida ay Puntland Mirror u sheegeen ilo-wareedyo dibloomasi oo lagu kalsoonaan karo. Doorashada [...]